Dampier, morontsirak'i Virginie Aostralia | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny Dampier, ny morontsirak'i Aostralia mbola tsy simba
Carmen Guillen | | Aostralia, General, Oseania
Raha misy morontsiraka kely fantatra nefa tsara tarehy any, dia tsy misy isalasalana Dampier, morontsiraka virijina any Aostralia. Nahita azy aho tamin'ny andro lasa teo tao anaty horonantsary fanadihadiana ary raiki-pitia taminy aho… Iray amin'ireo toerana hitanao amin'ny sary ao anaty magazine izany ary mihazakazaka haingana ianao manoratra ny anarany ao amin'ilay kahie mitondra ny lohateny hoe «Dia nampanantenaina».
Tsy nahalala na inona na inona momba ity morontsiraka ity sy ny fikarohana aho fa tsy nahita sary mahafinaritra fotsiny, izay tsy ho zaraiko aminao anio amin'ity lahatsoratra ity, fa nahita antony maro hafa hitsidihana azy ihany koa aho. Raha manintona ny masonao izany na ianao efa tena tia azy tamin'ny sary voalohany, toa ahy, dia vakio.
1 Ny vondronosy Dampier
2 Fizahan-tany sy trano fandraisam-bahiny
3 Asa atao azonao atao
Ny vondronosy Dampier
Dampier dia vondronosy noforonin'ireo nosy amoron-tsiraka Australie. Any akaikin'ny tanàna misy mponina 1.372 ihany no misy azy, mitondra ny anarana mitovy aminy, Dampier. Ny anarany dia voarain'ny buccaneer anglisy sy mpikaroka izay nitsidika ity faritra ity tamin'ny 1699, William Dampier.
Izy ireo dia mitotaly Nosy 31 izay ny anarany no tena tany am-boalohany, ary raha tsy mitsara ny tenanao ianao: Firaisana afovoany Atsinanana, Firaisana Andrefana, Firaisana Afovoany Andrefana, Keast, Kendrew, Lady Nora, Legendre, East Lewis, West Lewis, Malus, Mawby, Mistaken, Rosemary, Tidepole , Tozer sy Wilcox, Angel, Brigadier, Cohen, Conzinc, Delambre, Dolphin, Eaglehawk, Enderby, Egret, Gidley, Goodwyn, Haycock, Huay, firaisana, ary farany, ny firaisana amin'ny Atsinanana.
Toerana tsy manam-paharoa izay tsy maintsy jerena raha mitsidika ity nosin'i Aostralia tsara tarehy ity dia Broome, ny perla an'ny faritra, ary ny Cape Leveque, feno hatsaran-tarehy masiaka, tena izy ary mahavariana ny tanindrazany.
Fizahan-tany sy trano fandraisam-bahiny
Raha mitsidika ny faritra ianao dia tokony ho fantatrao fa ny karazan-trano dia miverimberina be any 'Fandriana sy torimaso' Ary na dia betsaka aza ny mahafinaritra, ny iray amin'ireo izay tiako indrindra tamin'ny voalohany dia ny 'Pinctada McAlpine House ' ao amin'ny Broome.
5-minitra miala eo afovoan'i Broome sy ny Beach amoron-dranomasina. Manolotra Wi-Fi maimaim-poana, sakafo maraina maimaim-poana ary pisinina any ivelany ianao. Ity fananana manan-tantara ity dia natsangana tamin'ny 1910 ary nivadika trano honenana. Izy io dia manana suite tsara tarehy, misy fantsom-panafody, vata fampangatsiahana ary dite sy kafe feno. Ny sasany manana patio manokana misy fahitana amin'ny zaridaina.
Ho an'ireo izay tia golf, dia ho faly ianao hahafantatra fa ity tranokala ity dia 5 minitra amin'ny fiara fotsiny avy ao amin'ny Monzón Gallery sy ny taranja golf an'i Broome. ny Fitsangatsanganana an-tsehatra Broome Hovercraft 9 minitra amin'ny fiara.
Asa atao azonao atao
Raha miala sasatra na miala sasatra mandritra ny andro vitsivitsy isika, dia tsy ny rehetra no hatory ary ao anatin'ny "Alatsinainy amin'ny Masoandro" ... Dampier dia toerana ankafizinao ary satria tsy tianay tsy ho azonao ny mahita ireo nosin'izy ireo amin'ny maha-izy azy rehetra, eto izahay dia mamporisika hetsika vitsivitsy azonao atao raha tsara vintana ianao mitsidika ny faritra misy anao:
Manaova a fitsangantsanganana an-tsambo manamorona ny morontsirak'i Aostralia Andrefana.
Fandroana any Edith Falls, mahatalanjona riandrano hita ao amin'ny valan-javaboary Nitmiluk.
Tsidiho ny National Park Windjana Gorge, miaraka amin'ny velaran-tany 2.134 XNUMX hektara, izay mampiseho lohasaha mahatalanjona niavian'ny reniranon'i Lennard. Iray amin'ireo toerana ireo na manao dia lavitra ianao na dia tsy hitanao isan'andro ...
Midira amin'ny a tsy mandeha amin'ny lalana mankeny amin'ny tehezan'i Cape Leveque hankafy ny morontsiraka an-tsambo ... Tsara tarehy ry zareo!
Mitaingina rameva amin'ny teboka samihafa amin'ny faritra Aostralianina. Ireo rameva ireo dia nalaina avy tany India sy Afghanistan, ary iray amin'ireo fitaovana fitaterana tian'ireo mpizahatany mitsidika ny faritra.
Jereo ny filentehan'ny masoandro avy amin'ny morony rehetra ... Manana loko hafa noho ny hitantsika isan'andro izy ireo.
Ary raha manam-potoana bebe kokoa ianao dia tokony hanao ilay sambo fitsangantsanganana Willie Pearl Lugger, izay manaraka ny morontsirak'i Aostralia mbola tsy simba.
Manantena sy manantena izahay fa i Dampier, tahaka ny androany, dia ho lasa irina tadiavin'ny maro aminareo noho ny lahatsoratray… Ahoana raha nofidintsika ho toeran'ireo fialantsasatra ho avy io izany? Ho hitanay eo ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tsidiho ny Dampier, ny morontsirak'i Aostralia mbola tsy simba
Ireo tanàna 5 ankafizin'ny anglisy any Great Britain
Toerana ho an'ny volan-tanteranao